Ezikhathini zasendulo, abantu babesebenzisa ukushefa Amazinyo izilwane, imimese kanye ngensimbi imbaza igobolondo. Ngokuhamba kwesikhathi, lezi amadivaysi onginike indlela insingo iqonde. Endaweni ethile, eminyakeni engu-200 edlule, amadoda anawo izindlela eziphephile kanye nsingo alahlwayo igobolondo at adaliwe esingaphansi eminyakeni eyikhulu edlule. Kodwa nge zonke ukujula kukhethwa abameleli nengxenye enamandla lwesintu uqhubeke bayobona ngokwabo okungcono shavers kagesi for amadoda. Ngaphambi kokukhetha zayo zokuqala wethuka woma kagesi kudingeka uphendula lo mbuzo: "Ingabe ngempela udinga ke?".
wethuka woma Electric for amadoda: izinzuzo
Okokuqala, siphawula ukuthi likhanga. Ngamadivayisi ezinjalo kuba nzima kakhulu ilimaze isikhumba noma alimale. With an kagesi insingo ukushefa inqubo budinga isikhathi esingaphansi. Kulokhu, ngaphandle kokukhetha, imodeli ingasetshenziswa uma ufuna ukushefa ezomile, okuyinto wenza sikwazi ukukwenza kusukela induduzo isitimela, indiza noma imoto, uma kukhona sezimoto. Inani wethuka woma ephakeme umshini izinga, kodwa kuvela ukuthi ukonga ngaphezulu nge ukusetshenziswa, ngoba angadingi ushintsho njalo izindwani. Ngaphezu kwalokho, ngosizo ke ungagcina ku ijeli noma ukushefa ayisikhilimu. Shaver okhokhela cishe 1.5-2 iminyaka, ngaleyo ndlela ungakwazi ukukhonza iminyaka 8-9. inzuzo wabo kusilungisi esakhelwe esisiza anakekele izinga ephakeme nentshebe futhi amadevu.
wethuka woma Electric for amadoda: amaphutha
ethile Its main - kuba ukushefa kancane eduze. Razor izindwani azisheleli ngaphansi kwesilevu futhi esihlathini, nge izinwele kokukhipha ungqimba engenhla isikhumba, babesebenza buqamama encane kuwo. Ngakho nakuba ungase ukwazi ukuthuthukisa indlela siqu kuso, ngokuvamile kufanele afeze olunzulu ukushefa insingo izikhathi ezimbalwa kwenye indawo, futhi lokhu kungase kubangele ukucasuka okuncane.
wethuka woma Electric for amadoda: zinhlobo
Zonke onobuhle zamanje ahlukaniswe isakhiwo zibe izinhlobo ezimbili eziyinhloko: rotary kanye Mesh. Njengoba zonke izinkampani wethuka woma kabani kagesi kuze kube manje ethulwa emakethe yasekhaya, umfuziselo wenziwe kuphela uhlobo olulodwa abalithandayo kuhlobane ngokuqondile kukhethwa brand.
wethuka woma amadoda yokumboza sika kagesi (Panasonic, Braun)
Electric Shaver net wafika kuqala. Ukwakhiwa lezi onobuhle kuhilela khona metal anezikhala mncane. Ngokushesha ngemva izindwani wakhe wahlela ukuba dlidliza uma usebenzisa yemigqa ezimbili (kusuka kule futhi zakha igama lesibili yalezi amadivaysi - vibration), kokukhipha izinwele zingene anezikhala.
Rotary shavers kagesi for amadoda (Braun, Philips)
I shavers rotary zitholakala ujikelezisa imimese isiyingi, basesimweni ikhanda ekhethekile. uhlelo ezinjalo laqanjwa ngemizamo Philips. Okwamanje samanje isetshenziswa kuwo wonke model of the brand. Ngaphezu kwalokho, i-razor okufanayo amakhanda ezintathu, nakuba umklamo ethé ukuhluka kancane, oluqanjwe Braun.
Ngokuvamile, akukho ehlukene rotary kanye anezikhala insingo zokushefa, ngakho-ke, ukunikeza ntandokazi kucace iyiphi yalezi izinhlelo akunakwenzeka. Uma kwenzeka uma ube nesipiliyoni esihle ne wethuka woma, umkhethe yini entsha yohlobo olufanayo njengoba e ushintsho kusuka imodeli anezikhala Rotor (kanye noHezekeli) kwandisa amathuba isikhumba ukucasuka.
Indlela ukukhetha izibuko antifary? Ikhomba nokwehlukana abashayeli
Omatilasi "Drimlayn": Izibuyekezo
Isicelo Umhlahlandlela ukudonsa izintambo phezu isiginci
Japanese namanabukeni Merries: Izibuyekezo ikhasimende
Kuhle Ipensela Sharpener - awayindwayo!
Autoclave ekhaya ukuwafaka. Ukudala imikhiqizo yayo siqu eliphezulu
UBazarov noPavel Petrovich: izici ezifanisayo (itafula). Bazarov noKirsanov
Umiyane Lantern - enakekela abantu, bloodsuckers abangenasihe
Indlela ukunqanda izingane hysterics?
Njengoba pawnshop ucubungula impahla nokuthi kungenzeka okuyibeka: Uhlelo zokufundisa ababoleka ezingaba
Agasti 29 - uphawu Virgo. Izici kanye Oluvumelana
Uyini izikweletu yangaphandle
Umthengi credit: izinhlobo kanye nezici
I-Modern Steam Cabin
Isibonakaliso Masons - imfihlakalo, igcinwe amakhulu eminyaka
Colony izingane. Sikhungo futhi izindawo kwezimilo